N'ebe a, THEMAX ga-ewebata gị ọtụtụ ụzọ nkwonkwo eriri eriri roba. A ga-ejikọ eriri ebu ebu na akaghị tupu ya ejiri ya. Ya mere, ogo nke nkwonkwo mgbatị na-emetụta ndụ ọrụ nke eriri ebu na ezigbo ọrụ nke eriri ebu. Usoro ndị a na-ejikarị na-ebufe eriri na nkwonkwo na-agụnye nkwonkwo igwe, nkwonkwo oyi na-ekpo ọkụ na nkwonkwo na-ekpo ọkụ
I. Conveyor belt n'ibu nkwonkwo usoro:
Ohaneze na-ezo aka n'iji eriri eriri akwa akwa. Usoro nkwonkwo a dabara adaba ma nwee akụ na ụba, mana arụmọrụ nke nkwonkwo dị ala ma dịkwa mfe imebi, nke nwere mmetụta ụfọdụ na ndụ ọrụ nke ngwaahịa ngwaahịa ebufe. Na PVC na PVG dum isi ire ọkụ-retardant antistatic ebu belt nkwonkwo, n'ozuzu ngwaahịa n'okpuru ọkwa 8 eriri eji a nkwonkwo usoro.
II.Cveyor belt oyi bonding nkwonkwo usoro:
Ọ pụtara na ọ na-eji oyi bonding nyagide maka nkwonkwo. Usoro nkwonkwo a na-arụ ọrụ nke ọma ma na-echekwa ego karịa nkwonkwo igwe, ọ kwesịrị inwe mmetụta nkwonkwo ka mma. Otú ọ dị, site n'echiche dị irè, n'ihi na ọnọdụ usoro ahụ siri ike nchịkwa, na àgwà nke nrapado nwere mmetụta dị ukwuu na nkwonkwo. Yabụ na ọ naghị akwụsi ike.
III.Cveyor belt thermal vulcanization nkwonkwo usoro:
Omume egosila na ọ bụ usoro nkwonkwo kachasị mma, nke nwere ike ịkwado arụmọrụ dị elu, yana ọ dịkwa mma. Ndụ ndụ nke nkwonkwo dịkwa ogologo ma dị mfe karị. Agbanyeghị, enwere ọghọm dịka usoro nsogbu, ụgwọ dị elu na ogologo oge, wdg.
Na roba ebu ebu ụlọ ọrụ, belt splicing bụ mgbe a nnukwu isi ọwụwa na nsogbu onye. Mana site na ịrụsi ọrụ ike na nyocha na mmepe, THEMAX chọta ezigbo ngwọta ngwaahịa maka ya. Ugbu a THEMAX na-enyere ndị nọ n'ime aka idozi nsogbu nkwonkwo na nkewa.